20-ruux oo ku geeriyootay dagaalo ka dhacay Xuduuda Itoobiya iyo Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
29th May 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Dagaalo ayaa laga soo sheegay deegaano dhaca xuduuda Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan deegaano dhaca Galgaduud, kadib markii Ciidamada Liyuu Boolis ee Kililka Shanaad ay weerareen deegaan ay ku sugnaayeen dad rayid ah.
Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali wehliye Cirfo ayaa sheegay in dagaaladaas ay dad badan ku dhinteen, isla markaana ciidamada maamulka Kililka shanaad ay ku soo duuleen dad xoolo dhaqato ah oo reer miyi ah.
Mr Cirfo oo la hadlayay Idaacada VOA ayaa sheegay in arrintan ay marar badan soo noq noqotay, ayna wal wal badan ku heyso dowladda Soomaaliya, waxaana uu ugu baaqay dowladda Federaalka Itoobiya in arrintaas soo fara geliso.
“Dagaalo ayaa ka dhacayay deegaanka Kheydar iyo Isma-Dhawa, ciidamada Liyuu Boolis ee Kililka shanaad ayaa waxay ku soo duuleen dad reer miyi oo xoolo dhaqato ah, khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawax ayaa ka dhashay, waa arrin laga naxo dowladda Soomaaliya wal wal ayay ku heysaa”ayuu yiri Guddoomiye Cirfo.
Waxaa uu sheegay in arrintan ay gaarsiiyeen saraakiisha Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM, isla markaana Wasiirada dowladda Soomaaliya ee Gobolka ku sugan la socodsiiyeen, waxaana uu ku baaqay in arrintaas si deg deg ah wax looga qabto.
Dagaalada ka dhacayay xadka Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan deegaano u dhow Gobolka Galgaduud ayaa ahaa kuwo dhowr jeer oo hore soo noq noqday, waxaana jirin ilaa iyo hada wax war ah oo ka soo baxay dowladdaha Soomaaliya iyo Itoobiya.